Tenga Satchels | Chikoro | Mapeji evaravara ehurukuro
Tenga Satchels | chikoro
Nyaradza paunenge uchipfeka
Ichecheti ndeyechokwadi mwoyo wekutanga kwechikoro. Pasinei nepepuru, yebhuruu kana yhizha, ine mavhiya kana unicorns, chinhu chikuru ndechekuti satchel semwana. Somubereki, zvisinei, tinoziva kuti optics pakutenga ranz ndiyo hafu yehondo. Shure kwezvose, satchel inofanira kupona kana kupfuura makore mana ekutanga kuchikoro.
Meso anotseuka kutenga satchel!
Zvinopera pasina kutaura kuti isu isu vabereki tine zvakawanda zvinodiwa zvechechi yekutakura yevana vedu.
Chii chatinofanira kutarisa patinenge tichitenga satchel
Saka, kana mwana wako atozvisarudzira kurota kwake, iwe unofanira kutarisa muenzaniso uyu zvichienderana nezvinorondedzerwa pasi apa. Mukuwedzera, iwe haufaniri kutenga satchel yemwana wako akazononoka, nokuti nokukurumidza kuchiva mienzaniso inotengeswa kunze uye kushungurudzika kwomwana wako kwakafanana zvakakura!
Chii chatinofanira kutarisa patinotenga satchel
Zvinonyanya kukosha ndekutanga kwechisimbiso chekubvumirwa. Ichechi inofanira kufanana ne NORM DIN 58124. Izvi zvinoita kuti sketi itsva ive isina mvura, inoshanda uye yakachengeteka. Iwe unogona kuona masokisi anowirirana nemutsetse uyu, mureza wakazara kana TÜV seal.
Uyewo teerera kutarisa uye mavara e-fluorescent. Mwana wako angave achida kutanga kutanga muchando kana ichiri chidiki. Misi yakajeka isina magadzirirwo haana kuonekwa nevashambadziri, saka chikwereti chinofanira kunge chine chekudzivirirwa. Zviratidzo zvinokanda kumashure kwechiedza chemotokisi yemotokari uye inoita kuti mwana wako aonekwe pachena. Izvo zvakakura uye zvakakura zvinoratidzira, zviri nani, kunyanya kana satchel isiri yakatsvuka yellow kana machungwa.
Coloring page / Coloring page mashekeri
Zvechokwadi, zvakare zvakakosha kuti satchel agere zvakanaka, kunyanya kana mwana wako achifanira kuenda kuchikoro kwenguva refu kana kuenda nebhazi. Mashecheketa kazhinji anoremedza zvikuru mutemo, naizvozvo kukodzera kwakakwana kunogona kutungamirira kumatambudziko kumashure uye kunyange kukanganisa. Saka risers inofanira kunge inenge inenge masendimita yakafara uye yakafukidzwa zvakanaka.
Shandekisi yakashongedzwa yakagadziriswa zvakare inotsanangurwa inokosha mukutengesa satchel. Inofanira kunge iri mitezo miviri yomuviri uye inenge yakasungirirwa zvakanaka semakumbo. Mutambo haafaniri kumbomira kunze kwemwana.
Mazano eSatchel kutenga
Zvakanakisisa kuita chiyero chinotanga muchitoro nesadhiketi yakachengetwa. Saka mwana wako anogona zvakare kutarisa kuti satchel yakazara inonzwa sei kumashure.
Satchels ane mapuranga uye zviri nyore-kuvhara chifukidzo
Kana satchel ichizadzisa zvose zvataurwa pamusoro apa, izvi ndizvo zvakakosha. Kana akasarudzwa akasarudzwa achiripo ane mapegi, hapana chinomira munzira yekutenga.
Nzvimbo dzepakati dzakagadzirirwa mabhodhoro emvura. Nokuti hazvisi mabhodhoro ose akaoma semirairo yekushandiswa inoita kuti tive nokutenda. Kuti kusava nemafashamo mumabhuku nemabhuku uye mabhuku anoramba akaoma uye akachena, bhodhoro remvura harifaniri kuiswa mu satchel pacharo, asi mumatumba ekunze.
Pakupedzisira asi kwete nepfungwa inokosha ndiyo Kuvharwa kwechechecheti, Mwana wako anofanira kukwanisa kuzarura nyore nyore uye nokukurumidza, kunyange izvo zvinogona kuedzwa muchitoro. Pakupedzisira asi kwete, pane chaizvoizvo chinangwa chakanaka - zvinonzwisisika kuti hapana mitemo yekutevera!
Montessori zvikoro | Dzidzo yezvikoro
Waldorf schools | Dzidzo yezvikoro
Mazano Okudzokera Kuchikoro | chikoro
Coloring page school - chikoro chikoro